Deg Deg: Xasan Daahir oo haatan kasoo dagtay Garoonka diyaaradaha Muqdisho “Waa sidee Xaalka?” |
Deg Deg: Xasan Daahir oo haatan kasoo dagtay Garoonka diyaaradaha Muqdisho “Waa sidee Xaalka?”
Diyaaradii waday Xasan Daahir Aweys ayaa haatan kasoo dagatay Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waxaana socdaalkiisa ku wehlinaya xubnihii dowlada ee dhawaan Cadaado utagay wadahadaladii ay Wadaadkaas la lahaayeen.
Xasan Daahir ayaa Magaalada Cadaado waxaa kasoo qaaday diyaarad qaas ah, waxaana xubnaha la socda kamid ah Sheekh C/qaadir Cali Cumar, waxaana la tilmaamayaa in sidoo kale ay qeyb ka yihiin dadka la socda Xassan Daahir madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb iyo Afhayeenka maamulkaasi.
Waxaa garoonka ku soo dhoweeyay saraakiil ka tirsan dowlada, waxaana amaankiisa si aad ah u adkaynaya ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM.
Amaanka ayaa aad loo adkeeyay waxaana wadaadka iyo xubnaha la socda loo galbiyay guri si gaar ah loogu sii diyaariyay oo kuyaal xeendaabka dowlada ee Muqdisho gaar ahaan meel aan ka dheereyn Madaxtooyada.
Saraakiil la socda Xasan Daahir Aweys ayaa inoo sheegay in Wadaadka Xaaladiisa ay wanaagsan tahay, isla markaana maalinta beri ah uu lakulmi doono Madax katirsan dowlada Soomaaliuya.
Wararkii soo Kordha dib kala soco somalinimo1.com Insha Allah